वार्ताबाट किन भाग्दैछ भारत ? – Online Sunapati
मुख्य पृष्ठ /News/वार्ताबाट किन भाग्दैछ भारत ?
‘छिमेकी पहिला’ कुटनीति अपनाएको दाबी गर्ने नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकार नेपालसँगको वार्ताबाट किने भागीरहेको छ त ? ‘प्रमुख कारण भनेको त बाहिर जति विरोध गरे पनि नेताहरूलाई मनाउन सकिहालिन्छ नि भनेको हुुनुपर्छ’ परराष्ट्र मामिलाका जानकार दिनेश भट्टराई भन्छन्, ‘नेपालसँगको वार्तालाई महत्व दिनुपर्छ भन्ने लागेकै देखिएन ।’
परराष्ट्र मामिलाका जानकार दिनेश भट्टराई नेपालको परराष्ट्र नीति ‘सुनिने र देखिने’ अवस्थामा पुगेको बताउने सरकारले अझै मेहनेत गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अबै साँच्चै कुटनीतिक कौशल देखाएर अतिक्रमित भूभाग फिर्ता ल्याउने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको काँधमा आएको छ ।’
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. भेषबहादुर थापा संवादहीनता भारतको पनि हितमा नभएको बताउँछन् । कुटनीतिक वार्ताकै माध्यमबाट समस्याको निकास निकाल्नुपर्ने उनको जोड छ । भारतमा राजदूत रहिसकेका पूर्वमन्त्री थापा भन्छन्, ‘मौनतामा आधारित अन्योल दुबै देशको हितमा छैन ।’